Iyadoo ay daadihinayaan technology isgaarsiinta iyo adeegyada network xogta mobile noqday si ka dhaqso badan abid, dad badan ay ka faa'idaysanayaan qalabka gacanta u video yeedhayso. Casriga ah intooda badan haatan kasoo muuqday kaamirooyin hore u jeeda in ay taageertaa video yeedhayso si ay u wada xiriiraan. Waxaa jira badan oo Chine video oo loo isticmaali karo. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah kuwa ugu caansan oo lacag la'aan ah oo ay bixisay video Chine in la jaanqaadaan aad casriga ah Samsung.
Top 4 Free Video Apps u yeedhay u Samsung casriga
Tango waa app ah in ay diiradda shabakadaha bulshada. Users waxay awoodaan in baaq loo diro, ay wacaan video free iyo codka ugu baaqaysaa qoyska iyo saaxiibada on qalabka Samsung aad.
App wuxuu kuu ogolaanayaa inaad saaxiibo ka heli toos ah. Waxa kale oo aad la shakhsiyeeyo kartaa profile la sawiro iyo updates xaaladda. Iyadoo Tango, aad ku raaxaysan karaan waxyaabaha soo socda:
Fun inta lagu jiro Free Video iyo Voice baaqayaa
Tango waa la heli karaa si loogu isticmaalo shabakadaha ugu weyn ee 3G, 4G iyo shabakadaha WiFi. Waxay bixisaa wac caalami ah oo lacag la'aan ah qof kasta oo sidoo kale ku Tango. Maxaa ka xiiso badan yahay in aad awood u leedahay xataa ciyaaro kulan mini inta lagu jiro calls video.
Waxa intaa dheer in mid ka mid-ka-mid qoraalka, chat group ay ku haboon kartaa ilaa 50 saaxiibo isku mar! CHAT group Custom abuuri karo oo dadka isticmaala waxay awoodi karaan in ay la wadaagaan warbaahinta sida sawirada, codka, farriimo video iyo stickers.
Iyadoo Tango, waxa aad awoodi kartaa in ay la kulmaan saaxiibo qiimaynaya danaha la mid ah. Users awood u yeelan doonaan in ay u dhow arkaan kale users Tango!
2. Viber ( http://www.viber.com/en/#android )
Viber waa app caan ah fariimaha in bandhigay calls video muuqan 2014. soo diyaariyay RL Viber Media S.à, ka sokow fariimaha qoraalka ku salaysan ay ku guuleystay adeega, Viber ayaa tan oo kale ee uu ka samaysan yahay ay video wacaya soo jiidasho leh:
Feature Viber Out
Tani waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala Viber si ay ugu yeedhaan oo kale isticmaala aan Viber isticmaalka taleefannada gacanta ama diro telefoonnada guryaha ee heerka hoose. Waxayna u shaqaysaa iyadoo shabakado weyn ee 3G ama WiFi.
Isgaarsiinta ee ugu
Users ay awoodaan in ay u hagaagsan liiska ay telefoonka ee xidhiidhka iyo app waxay muujinayaan kartaa kuwa hore u yihiin Viber. Voice ugu baaqaysaa iyo wicitaanada video waxaa la samayn karaa iyadoo HD tayada codka. Farriin group ilaa 100 ka-qaybgalayaasha la abuuri karo iyo sidoo! Pictures, videos, iyo fariimaha codka la wadaagi karo oo stickers dhaceen ayaa la heli karaa si uu u muujiyo in aad niyadda kasta.
Adeeg heer sare ah Viber ayaa u kordhiyay xukunka ruuxiga casriga ah. App ee "taageero Xidho Android" wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto oo aad hesho farriimo ka soo jeeda, smart. Waxaa intaa dheer in, waxaa jira codsi Viber Desktop abuuray gaar ahaan isticmaalka on Windows iyo Mac. Ogeysiis riix Its sidoo kale ballan qaadi karno in aad heli doontaa fariin kasta oo wac - xataa marka app uu dansan yahay.
Xidhiidhka la sii wado aad jeceshahay adiga oo isticmaalaya mid ka mid ah app ugu caansan; Skype by Microsoft waxaa loo yaqaan mid ka mid ah macmiilka ugu wanaagsan ee calls video on android, mahad sano oo khibrad ah in industry ee ay. Skype bixisaa fariimaha deg dega ah oo lacag la'aan ah, cod iyo wicitaanada video. Doonaya in ay ku xirmaan kuwa aan ku Skype? Welwelina, waxay bixisaa kharashka yar wicitaanada ka dhigay in mobile iyo taleefannada guryaha. Skype waxaa sidoo kale loo yaqaan ay:
Waafaqsan yahay qalab kala duwan
Skype qof ka yimid meelo kale; app waa la heli karaa si loogu isticmaalo u Samsung casriga ah, kiniin ah, kumbiyuutarada, Macs ama xataa telefishin.
Media Sharing sameeyey Easy
Si fudud u wadaagaan SNAP aad jeceshahay ee maalintii oo aan ka walwalayn ku saabsan oogin. Its xor ah oo aan xad lahayn feature video Fariin video kuu ogolaanaysaa inaad daqiiqado aad qoyskaaga iyo saaxiibadaa wadaagaan si fudud.
4. Google tagi ( http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/ )
Google tagi, ee ay Google, waa mid ka mid ah app ugu caansan video-sheekaynta in loo isticmaalaa ku dhawaad ​​500 milyan oo dadka isticmaala ku Android madal keliya. Sida app kasta oo kale, tagi u ogolaanaya in ay user in baaq loo diro, share photos, khariidado, iyo stickers iyo sidoo kale in la abuuro CHAT group of ilaa 10 qof.
Maxaa ka dhigay tagi gaarka ah waa in ay:
Tagi waxaa gundhig gudahood Gmail. Tani waxay ku haboon tahay in kuwa multitaskers kuwaas oo doonayay in ay u diraan emails halka wali ay awoodaan in ay ka hadlaan in ay saaxiibadood.
Live-il la tagi on Air
Habkaani gelineya inaad la hadasho dhagaystayaal si toos ah uga your computer qasabno oo kaliya dhowr iyo warbaahinta gudahood dunida oo lacag la'aan ah oo dhan. Il ayaa sidoo kale jiri doona si cad loo heli karo oo aad tixraacyada ka dib.
Users ay awoodaan in ay isticmaalaan credit ugu yeeray in waxa laga iibsan karaa via ay account Google samaynta in wicitaanada raqiis ah landline iyo telefoonnada gacanta.
Top 2 mushaarka Video Apps u yeedhay u Samsung casriga
Maalmahan, horumarinta waxaa badanaa bixiya Chine ay si xor ah oo isku dayda in ay iibiso ay app iyada oo in-app iibsadaan. Waxaa jira tiro yar oo bixiyo video yeedhayso app for Samsung casriga ah ee laga heli karo suuqa Android.
1. V4Wapp - Video chat u App kasta
Soo diyaariyay Fikradaha xanafta leh, app this dhameystirta codsiyada chat kale sida Whatsapp ay ku daray codka iyo video awoodda in app. App waxay u baahan qofka ka dhigaysa yeedho in ay v4Wapp lagu rakibay qalabka ay halka aqbalana wicitaanka ma u leeyihiin in ay. Aqbalana waa in uu leeyahay Chrome browser ugu dambeeyay ee lagu rakibay. Barnaamijyadooda kale oo ay taageerayaan ka mid ah SMS, Facebook Rasuulkiisa, Snapchat, Wechat.
Waxaad ku heli kartaa qarashka oo dhan $ 1.25.
Threema waa app gacanta fariin in ay diyaariyeen Threema GmbH. App Tani waxay bixisaa hawlaha caadiga ah ee diro iyo qaybsiga fariimaha, sawirada, cajaladaha iyo meesha GPS. Group CHAT abuurka ayaa iyana la bixiyaa. Si kastaba ha ahaatee, cod call shaqo ma aha sahlan loo heli karo.
App Taasi laftigeeda faantaa in ammaanka iyo gaarka ah in ay bixisaa in dadka isticmaala ay. Iyadoo sirta dhamaadka-to-dhamaadka, dadka isticmaala ee Threema isu ilaalin karaa xadgudubyada iyo wuxuu noqon karaa hubo inta kale in wada hadalka ay la helayo iyo sii gaarka loo leeyahay. Taana waxaa lagu gaarayaa iyada oo soo socda:
Heerka Sare ee Data Protection
Threema ma ururiyaan iyo iibiso xogta. App Tani kaydiso kaliya macluumaadka lagama maarmaanka u ah taako ugu gaaban markii ay suurtagal tahay iyo fariimaha aad la tirtiro doonaa isla markiiba ka dib marka la loo dhiibaa.
Ugu sarreeya Heerka sirta
Dhamaan xidhiidhka la Windows XP doonaa iyadoo la isticmaalayo xaalad technology tahay dhamaadka-to-dhamaadka sirta. CHAT shaqsi iyo koox la Windows XP doonaa. Users kasta oo sidoo kale heli doontaa ID gaar ah Threema sidii ay aqoonsi. Tani waxay awood u isticmaalka ee app la dhamaystiran anonymity.s
Threema waxaa lagala soo bixi karaa qiimaha $2.49.
> Resource > Android > Top 6 Video Apps u yeedhay u Samsung casriga